University of Bedfordshire (UK) နှင့် STI Myanmar University တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့်
BEng( Hons ) Civil Engineering, BEng ( Hons ) Architectural Engineering, BEng ( Hons ) Civil Architectural Engineering, BEng ( Hons ) Electronic Engineering ( Hons ) Construction Managementဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက် ???
Foundation မှ ဘွဲ့ရရှိသည်အထိ သင်တန်းကာလ ၄ နှစ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း / IGCSE အောင်မြင်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Back to School Promotion အဖြစ်
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မတိုင်မှီ ကျောင်းလာရောက်အပ်နှံမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် USD 500/ Laptop / Tablet မိမိနှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဘာလို့တက်ရောက်သင့်သလဲ ???
------------------------------ အောက်ဖော်ပြပါ State-of-the-art Lab Facilities များ အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အတွေ့အကြုံရှိ ၀ါရင့်ဆရာဆရာမကြီးများမှ စာတွေ့ လက်တွေ့ချိတ်ဆက် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိခြင်း။ 1. AutoCAD Design Laboratory
9. Architecture Design Studio STIMU သည့် အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏ Coorporate Member ဖြစ်ခြင်း။ STIMU ( MICT Campus ) သည် MICT Park ကြီးအတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းအင်္ဂါရပ် များနှင့် အညီ အဆောက်အဦး ၏ ကြမ်းခင်းဧရိယာ အများဆုံး ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကားရပ်နားရန် ကျယ်ဝန်းသော နေရာများ ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရဝုဏ် နှင့် တင့်တယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွင်သင်ကြားရခြင်း။ ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် အလုပ်ခွင်များတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရသည့်Internship program များ ပါရှိပြီး အောင်မြင်နေသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် များတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရခြင်း။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ... STI MU ( MICT Campus )